ओठ सुक्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुस् यि उपाय ! | Hamro Doctor News
ओठ सुक्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुस् यि उपाय !
जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ । जाडो मौसम सुरु हुनासाथ अनेक समस्याहरु प्नि सुरु हुन थाल्छ । जस्तै छाला सुक्खा हुनु, ओठ सुक्नु आदि । ‘ओठ’ भन्ने वित्तिकै सौन्दर्यतालाई झल्काउँछ । त्यसैले मानिसहरु आफ्ना ओठमाथि विशेष ध्यान पुर्याउने गर्छन् । तर पनि मानिसहरु ओठ सुक्ने समस्याले हैरान हुन्छन् । प्रायः गर्मी तथा जाडोयाममा मानिसहरुमा ओठ सुक्ने समस्या देखापर्दछ ।
कतिपयको त ओठ सुकेर रगत पनि बग्ने गर्छ । त्यति मात्र होइन, ओठको समस्याले मुखै छोपेर हिड्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । जसले मानिसहरु निकै आजित भएका हुन्छन् । ओठ सुक्ने समस्या विभिन्न कारणहरुले हुनसक्छ । तर यसबाट बच्न निम्न प्रकारका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ :–
► ओठ सुकेपछि प्राय मानिसहरुले जिब्रोको सहायताले ओठलाई चिसो बनाउने गर्दछ । कतिपयले त दाँतले टोक्ने पनि गर्छ जसले गर्दा रगतै निस्किन्छ । त्यसैले ओठ संवेदनशिल अँग भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
Last modified on 2018-11-19 10:57:49